गायिका रचना मैदान प्रवेश गरेकाे विषयमा क्यानले सोध्यो स्पष्टीकरण – Karnalikhabar
गायिका रचना मैदान प्रवेश गरेकाे विषयमा क्यानले सोध्यो स्पष्टीकरण
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले त्रिकोणात्मक टी-२० क्रिकेट शृङ्खलाको फाइनल खेल क्रममा गेट तोडेर दर्शक प्रवेश गरेको र असम्बन्धित व्यक्ति पुरस्कार वितरण समयमा मैदान प्रवेश गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सोमबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा नेपाल र पपुवा न्युगिनी (पीएनजी)बीच ४ ओभरको खेल जारी रहँदा दर्शक गेट तोडेर भित्र प्रवेश गरेका थिए । ‘मैले सुरक्षा निकायसँग बुझ्दा टिकट काट्ने काउन्टर र गेटसँगै परेको रहेछ । हाम्रो पार्टनर (सुन्बी होल्डिङ) ले त्यहाँसँगै नराख भनेको रहेछ । अलि तल राखभन्दा त्यही राखेको रहेछ । त्यहीँ प्रेसर पर्‍यो । त्यो मौका पाउँदा हुल नै भित्र छिर्‍यो,’ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले भने, हामीले यसबारे सुन्बी होल्डिङसँग स्पष्टीकरण सोधेका छौँ ।’
यसअघि क्यानले प्रतियोगिताको कमर्सियल राइट सुन्बी होल्डिङलाई दिएको थियो । सुन्बी होल्डिङले टिकटको लागि आईएमी-पे र सुरक्षाको लागि केटीएमलाई जिम्मा दिएको थियो । खेल सकिएपछिसमेत दर्शक दीर्घाबाट मैदान प्रवेश भएपछि क्यानले सुन्बीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । क्यानले पुरस्कार वितरणका लागि प्रमुख अतिथिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आमन्त्रण गरेको थियो । पुरस्कार वितरण समारोहमा गायिका रचना रिमाल र दर्शक नै मैदान प्रवेश गरी ट्रफीसहित फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखिएको भेटेपछि क्यानले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
‘सुरुमा सहयोगी होलान् भन्ने सोच्यौँ । फेसबुकमा पनि ट्रफी समातेर फोटो राखेको देख्यौँ । यो के कारणले भयो ? कसरी भयो ? भनेर हामीले स्पष्टीकरण सोधका छौँ, ’ मल्लले भने । मलेसिया, नेपाल र पीएनजी सम्मिलित टी-२० शृङ्खलाको फाइनल खेलमा पीएनजीलाई ५० रनले हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको थियो । जुन सन्दीपको कप्तानीमा नेपालले प्राप्त गरेको पहिलो उपाधि बन्यो ।
– न्युज कारखाना बाट
अघिल्लो - सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै
अरुलाई रोक्दै अमेरिका भने रुससँग ठूलो मात्रामा तेल खरीद गर्दै - पछिल्लो